Bishaan Kilaasii saamsame miidhaa waan geechisuuf hawaasni irraa of qusachuu qaba- Ministeera Daldalaa – Fana Broadcasting Corporate
Bishaan Kilaasii saamsame miidhaa waan geechisuuf hawaasni irraa of qusachuu qaba- Ministeera Daldalaa
Finfinnee, Fulbaana 10,2011(FBC)-Bishaan Kilaasii saamsame miidhaa waan geechisuuf hawaasni fayyadamuu akka hin qabne Minsteerri Daldalaa beeksiise.
Ministeerichatti Daarektarri Inispeekshinii fi Gabaa obbo Kaasahuun Mulaat akka himanitti,Dhaabbanni Dhuunfaa Balaay Industiriyaal Itti Gaafatamummaan isaa murtaa’e kan oomishu bishaan saamsame Kilaasii jedhamu fayyaa irratti miidhaa kan qabu ta’uuun mirkanaa’era.
Bara 2007 hanga 2009tti qorannoo ququllinaa gaggeeffameen oomishichi hanqina ququllinaa irra deddeebin irratti kan mul’ate yoo ta’u,kan dhorkamee fi gabaa irraa akka sassaabu taasifamee ture jedhaniiru Daarektarichi.
Dhaabbatichi qulqullina akka fooyyeessu dirqamaan akka mallatteessuu taasisuu ibsuun,sirreessun isaa erga mirkanaa’ee Mudde bara 2009 dhorki irraa ka’uun gara hojiitti deebi’ee ture.
Ebla bara 2010 inispeekshinii gaggeeffameen omishni Kilaasii sadarkaa qulqullina barbaachisu kan hin qabaanne ta’ee argamee jira.
Haaluma kanaan bishaan Kilaasii saamsamehawaasni fayyadamuu akka hin qabne ministeerichi ibsa Faanaa Broodkaastingi Koorporeetif ergeen beeksisee jira.